KULMIYE Party » Madashii Komishanku Doorashooyinku kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee uu ku guulaystay Madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalkii la odhan jiray Soomaaliya. Xafladda Komishanku kaga dhawaaqay natiijada doorashada Madaxtooyada oo ka dhacday xarunta Komishanka ee caasimadda Hargeysa gelinkii dambe ee maanta, waxa ka qaybgalay badi haldoorka dalka Somaliland oo isugu jira masuuliyiin, culimo, aqoonyahan iyo madax ka socotay xisbiyada siyaasadda. Madashii Komishanku Doorashooyinku kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee uu ku guulaystay Madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalkii la odhan jiray Soomaaliya. Xafladda Komishanku kaga dhawaaqay natiijada doorashada Madaxtooyada oo ka dhacday xarunta Komishanka ee caasimadda Hargeysa gelinkii dambe ee maanta, waxa ka qaybgalay badi haldoorka dalka Somaliland oo isugu jira masuuliyiin, culimo, aqoonyahan iyo madax ka socotay xisbiyada siyaasadda. – KULMIYE Party
Madashii Komishanku Doorashooyinku kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee uu ku guulaystay Madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalkii la odhan jiray Soomaaliya. Xafladda Komishanku kaga dhawaaqay natiijada doorashada Madaxtooyada oo ka dhacday xarunta Komishanka ee caasimadda Hargeysa gelinkii dambe ee maanta, waxa ka qaybgalay badi haldoorka dalka Somaliland oo isugu jira masuuliyiin, culimo, aqoonyahan iyo madax ka socotay xisbiyada siyaasadda.
HomeMadashii Komishanku Doorashooyinku kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee uu ku guulaystay Madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalkii la odhan jiray Soomaaliya. Xafladda Komishanku kaga dhawaaqay natiijada doorashada Madaxtooyada oo ka dhacday xarunta Komishanka ee caasimadda Hargeysa gelinkii dambe ee maanta, waxa ka qaybgalay badi haldoorka dalka Somaliland oo isugu jira masuuliyiin, culimo, aqoonyahan iyo madax ka socotay xisbiyada siyaasadda.
Madashii Komishanku Doorashooyinku kaga dhawaaqeen natiijada codbixintii Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee uu ku guulaystay Madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi oo noqday Madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay madaxbannaanideeda kala soo noqotay dalkii la odhan jiray Soomaaliya.